Fandalinana tranga |
Fonosana daty saodiana
Ny milina famonosana thermoform ho antsika dia tena ankafizin'ny tsena Mid-atsinanana koa amin'ny daty plum. Daty famonosana dia mametraka fangatahana avo amin'ny famoronana masinina. Tokony ho azo antoka fa ny fonosana rehetra dia voalamina tsara sy mafy orina mba hitondra ny datin'ny lanja isan-karazany. Daty packagin ...
Fonosana dibera amerikana
Ny milina fonosana ataontsika dia ampiharina betsaka amin'ny vokatra semi (semi). Miaraka amin'ny fankatoavana ny haitao misy antsika dia mpanamboatra dibera amerikana iray no nividy milina 6 tamin'ny 2010, ary nanafatra masinina bebe kokoa 4 taona taty aoriana. Ankoatry ny fiasa mahazatra amin'ny famoronana, famehezana, fanapahana, ny ...